Hery – Malag@sy Miray
Ny Ainga – Revy mbola mitohy
Nandritra ny fialan-tsasatra tany Madagasikara farany teo dia ny tarika Ny Ainga no hitako hoe artistam-bahoaka (dika tsotsotran’ny hoe populaire) indrindra. Koa angamba rariny raha asiana resaka kely eto amin’ity blaogy ity androany.More…Taloha aho dia mba tia ny hiran’i Ny Ainga koa toa ireo tovolahy sy tovovavy nitovitovy sokajy, saranga, taona, revy tamiko. « Revy milay »… izay foana no malaza. Nanenjika ny rindran-kira natao tao Antananarivo. Nanana horonam-peo K7 Ny Ainga. Ny antony angamba dia noho ireo hirany izay mikasika ny fiainan’ny tanora nitovy taona sy sokajy tamiko mivantana. Hamafisiko foana ilay sokajy satria misy olona tsy mety tafiditra ao amin’ireo mpitia hiran’i Ny Ainga.
Hery	8 Commentaires
Ohabolana malagasy ny hoe « Izay tsy miady, olom-bodo fa ny to fo mamosavy ». Fa mbola fomba fitenenana malagasy koa ny hoe « Manao vazaha mody miady ». Ilay voalohany milaza hoe olona adala izay tsy miady fa ilay mitana an-dolom-po no tsy mety. Ilay faharoa kosa dia ny mifanohitra tanteraka amin’izay: rehefa miady dia miady fa tsy toa ny vazaha (hita amin’ny télé matetika… ohabolana vaovao io izany?) hoe milaza fa miady kanefa mifandray tanana ihany. Eo amin’ny resaka politika anefa dia tena mirona tanteraka amin’ilay fitenenana voalohany ny Malagasy amin’izao fotoana izao. Rehefa ady dia ady… ary matetika dia tsy ny hevitra intsony no toherina fa ilay olona sy ny maha…
Hery	3 Commentaires
Remise en question de la sécurité aérienne
Ce qui résume la situation à Madagascar
Ne plus rester un pays d'échantillon
Mamery olona ny fivarotana ao Behoririka